GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints 1.32.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.32.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကြည့်ရန် gpx, KML, KMZ, လော့ကျွန်းဖိုင်များ, ဒါပေမယ့်အများကြီးပို features တွေရ။ ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံး rated မြေပုံ app ရဲ့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုပါ။ GPX Viewer ကိုအဆုံးစွန် GPS တည်နေရာဖြစ်ပါသည်, GPS, ကြည့်ရှုသူ, Analyzer, အသံဖမ်း, tracker နှင့်သင့်ခရီးစဉ်နှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများများအတွက်ရိုးရှင်းသောအညွှန်း tool ကိုခြေရာခံ။
GPX, KML, KMZ AND လော့ကျွန်း
•အမြင်ပုဒ်, gpx ကနေလမ်းကြောင်းနှင့်အမှတ်များ, KML, KMZ နှင့်လော့ကျွန်းဖိုင်တွေ
•မျိုးစုံဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အကြိုက်ဆုံးဖိုင်တွေနဲ့သမိုင်းအဘို့အထောက်ခံမှုရှိပါတယ်ထားတဲ့ဖိုင်ကို browser ကို
• KMZ သို့ gpz နှင့် KML file တွေကိုသို့ gpx ဖိုင်တွေချုံ့ (ဇစ်မော်ကွန်းတိုက်)
• cadence, နှလုံးခုန်နှုန်း, ပါဝါနှင့်လေထုအပူချိန်ကဲ့သို့သောအခြားလမ်းကြောင်းအချက်အလက်များ၏မြင်ကွင်းကိုဂရပ်များ
•အမှတ်များအဘို့သတင်းအချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်၎င်းတို့၏ icon တွေကိုချိန်ညှိ
•မြင့်, အမြန်နှုန်း cadence, နှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်လေထုအပူချိန်အားဖြင့်လမ်းကြောင်းများနှင့်လမ်းကြောင်းလိုင်းအရောင်ရွေးရန်
•ဤကဲ့သို့သော Google Maps ကို, Mapbox အဖြစ်အွန်လိုင်းမြေပုံများ, ဒီမှာ, Thunderforest နှင့် OpenStreetMap ဒေတာအပေါ်အခြေခံပြီးအချို့အခြားသူများ preview ကို : https: // go .vecturagames.com / အွန်လိုင်း
• OpenWeatherMap ရာသီဥတုအလွှာများနှင့်ထပ်
•သင့်ထုံးစံအွန်လိုင်း TMS သို့မဟုတ် WMS မြေပုံ add
လွယ်ကူရှင်းလင်း navigation tools
•မြေပုံပေါ်တွင်လက်ရှိ GPS စနစ်အနေအထားကိုပြသ
•မြေပုံအနေအထားချိန်ညှိခြင်းဖြင့်စဉ်ဆက်မပြတ် GPS စနစ်အနေအထားအတိုင်းလိုက်နာ
•လှည့်မြေပုံ device ကိုတိမ်းညွတ်အာရုံခံကိရိယာသည်နှင့်အညီသို့မဟုတ် GPS ကနေလှုပ်ရှားမှုဦးတည်ချက်အချက်အလက်များအရသိရသည်
•နောက်ဆက်တွဲ GPS စနစ်အနေအထားနှင့်လှည့်မြေပုံ features တွေနှင့်အတူ GPX Viewer ကိုရိုးရှင်းတဲ့အညွှန်း tool ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
• GPS စနစ်အနေအထားကိုချိန်ညှိအကွာအဝေးနှင့်အတူအမှတ်များကနီးသည်အကြောင်းကြားစာရသောအခါ
GPX Viewer ကိုအလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီအရာရာကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်!
သငျသညျအစရိုးရှင်းတဲ့အညွှန်း, အွန်လိုင်းမြေပုံများ, GPS တည်နေရာနှင့်အတူ tool ကိုကြောင်းကြွယ်ဝသော gpx ကြည့်ရှုသူ feature ချင်လျှင်, GPS, ကြည့်ရှုသူကိုခြေရာခံ, ခရီးစဉ်စာရင်းဇယားဖြင့်ကြည့်ရှုသူများနှင့်အခြားအသုံးဝင်သော features တွေရှိပါတယ်, GPX Viewer ကိုကြောင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး app ကိုပါ!
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints အား အခ်က္ျပပါ
jaattube စတိုး 518 84.77k
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.32.5
ထုတ်လုပ်သူ Vectura Games
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://vecturagames.com/privacy_gpxviewer
လက်မှတ် SHA1: 0E:B2:6D:F5:BA:EE:BD:8C:C6:A1:30:CB:56:6F:C9:0E:15:5C:DC:29
GPX Viewer - Tracks, Routes & Waypoints APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ